जोगी आम-मानिसभन्दा चार दोब्बर बाँच्छ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नेरी थापा सदभावना राजदूत
राजाको फोटो भएको नोट विस्थापन अन्तिम चरणमा →
यो साताभरि पशुपति क्षेत्र जोगीहरूले भरिभराउ थियो । यी जोगीहरूको हाउभाउ, बोली-व्यवहार एवं जीवनशैली आम-मानिसका लागि अनौठा थिए । कहिल्यै पशुपति नपुग्ने युवाहरू पनि यिनै जोगीको क्रियाकलाप हेर्न श्लेषमान्तक वन ’round घुमिरहेका देखिन्थे । कतिपयले यो अवसरलाई गाँजा, भाङ, धतुरो खाएर जोगीसँगै लठ्ठिने अवसर पनि बनाएका थिए । नागा बाबाहरूको क्रियाकलाप अर्को रोचक पक्ष थियो ।
शिवरात्रीका अवसरमा प्रत्येक वर्ष हुने यस्ता क्रियाकलाप आम-मानिसका लागि अनौठा भए पनि यसलाई योगीहरू आफ्नो जीवनशैली मान्छन् । आखिर योगीहरू किन यसो गर्छन्, यसका पछाडि के कारण छ ? हाम्रो दृष्टिमा अचम्म लाग्ने उनीहरू हाम्रो जीवनका ’boutमा के सोच्छन् ? यसको सोधखोज गर्ने क्रममा साप्ताहिकले योगी गंगा दासलाई फेला पार्‍यो । जोगीहरूको भीडभाड एवं मगन्ते प्रवृत्तिभन्दा भिन्न ध्यानमा लीन भएको देखेपछि साप्ताहिकले उनीसँग जोगीको जीवनका सम्बन्धमा एक घण्टा गरेको कुराकानीको अंश:
म ईश्वरपुत्र, ईश्वरको सेवक ।
ईश्वर पुत्र भनेपछि तपाईंका पिता पनि होलान्, ती ईश्वर कहाँ छन् ?
कहाँ छैनन् ? सबैतिर छन् । मनभित्र छन्, मनबाहिर छन् ।
तपाईंलाई जन्माउने पिताचाहिँ पिता होइनन् ?
उनी कुशेश्वर झा अर्थात् यो शरीरका पिता हुन्, मेरा होइनन् । उनलाई मैले १२ वर्षमै त्याग गरें । ’cause कुशेश्वर मरिसके, अहिले गंगा दास बाँचिरहेको छ । गंगा दासले १२ वर्षर्देखि आफ्नो साँच्चैको पिता खोजिरहेको छ । ईश्वरमा समाहित हुने माध्यम गंगा दास हो ।
हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा माता-पिताको सेवा नगर्ने पुत्र कुपुत्र हुन्छ भनिएको छ, तपाईंले चाहिँ ईश्वर खोज्ने नाममा आफ्ना माता-पिता एवं घर त्याग गर्नुभयो, पाप लाग्दैन ?
तिमीहरू यो गम्भीर कुरा बुझ्दैनौ । …अँ यति बुझ, रामानन्दी सम्प्रदायमा प्रवेश गरेपछि हाम्रो गोत्र बद्लिन्छ । हाम्रा लागि घर, घर रहँदैन । हाम्रो मात्र होइन, हिन्दू धर्ममा अघोरी, दिगम्बर, अखडा, उदासी जस्ता सयौं सम्प्रदाय छन्, त्यसमा प्रवेश गर्नु भनेको पुरानो परिचय त्याग्नु हो । तिमीले हामीलाई देख्दा अनौठो लाग्छ, तर यो हाम्रो जीवनशैली हो । मैले तिमीलाई देख्दा यस्तो अप्ठेरो जीवन कसरी बाँचिरहेका छौं भनेर दया लाग्छ ।
हामीलाई भने तपाईंको यो दरिद्र जीवन देख्दा दया लाग्छ, किन होला ?
’cause तिमीहरूलाई यथार्थ कुरा थाहा छैन । तिमी जसलाई मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरी श्रीमती, मेरो पद, मानिरहेका छौं, भोलि त्यो तिमीसँग रहँदैन । जुन कुरा तिमीसँग छैन, त्यही कुरामा अभिमान गरिरहेका छौं । तिमी सबै कुरा पाएर पनि तनावमा छौ, म दरिद्र भएर पनि सन्तोषी छु ।
तपाईंको विचारमा हाम्रो जीवनको कुनै उद्देश्य छैन ?
मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । गृहस्थ धर्म ठूलो धर्म हो तर जे छ त्यसमा सन्तोष मानेर अध्यात्मिक जीवन बाँच्ने हो भने त्यो जीवन राम्रो हो । यहाँ तिमीले भिखारी, चटके, मूढ विभिन्न जोगी देख्छौं । उनीहरूले तिमी जस्ता सोझा मानिसलाई झुक्याएर बर्बाद पार्छन् । यस्ता जो गीहरू पनि वास्तविक योगी होइनन् । उनीहरू पनि खराब जीवन बाँचिरहेका छन् । त्यसैले गृहस्थ राम्रो कि योगी राम्रो भनेर दाँज्ने कुरा हुँदै न । व्यक्तिचाहिँ असल कि खराब भन्ने हो । यद्यपि जोगीको सानो गल्ती पनि माफ हुँदैन । ’cause ऊ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य त्याग्ने संकल्पका साथ योगी भएको हुन्छ, तर गृहस्थले त्यो दावी गर्दैन ।
त्यसो भए असल योगीको परिचय के हो ?
धेरै ठूलो प्रश्न सोध्यौं । यसको उत्तर लामो हुन्छ । यति बुझ, सबै पहेंलो लुगा लगाउन व्यक्ति योगी होइन । नाङ्गो हुनेबित्तिकै, दुई-चार कुराको भविष्यवाणी गर्नेबित्तिकै उसलाई नपुज । ’cause योगीले यस्ता कुरामा विश्वास गर्दैन । उसको लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो ।
तपाईंले ईश्वर पाइसक्नुभयो ?
छैन, पाउने प्रयासमा छु तर यति थाहा छ, यो सारा संसार ईश्वरको माया हो । म उनमै समाहित हुन चाहन्छु । सबै असल मानिसको अन्तिम प्रयास नै ईश्वर प्राप्ति हो ।
एउटा ईश्वर प्राप्त गर्न यति दुःख गर्नुभएको हो ?
स्त्री सुखबाट वञ्चित हुनु, सन्तान नहुनु, घर-बार नहुनु, के यो दुःख होइन ?
तिमी जुन कुरालाई सुख भनिरहेका छौ, त्यो नै दुःख हो । गृहस्थ साना सुखका लागि ठूलो दुःख खेप्न तयार हुन्छ । हामी ठूलो सुखका लागि साना-तिना दुःख सहन तयार हुन्छौं ।
तैपनि यत्रो जवानीका दिन गए, एउटी सुन्दर स्त्री भोग गरौं, राम्रो सन्तान जन्माऔं भन्ने लाग्दैन ?
लाग्दैन, ’cause मलाई आँपको स्वाद थाहै छैन । थाहा पाउने आवश्यकता छैन ।
तैपनि आँप मीठो हुन्छ भन्ने सुन्नुभएको होला, एकपटक चाख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन ?
तिमी रकेट चढेका छौ ? रकेट चढ्दा आनन्द आउँछ भन्ने पनि सुनेका हौला, तर तिमी रकेट नचढी म मर्दै मर्दिनँ भनेर दाबी गर्छौ ? समझदार व्यक्ति भए पक्कै गर्दैनौ । संसारका करोडौं कुरा कुरा तिमीलाई थाहा छैन, तिमी ती कुरा थाहा पाउनु आवश्यक पनि मान्दैनौ । हाम्रा लागि स्त्री, पुत्र र सम्पत्ति त्यस्तै काम नलाग्ने कुरा हुन् ।
तपाईंका लागि ती कुरा किन काम नलाग्ने भए ?
’cause तिनले समय बर्बाद पार्छन् । गृहस्थ व्यक्ति कति समय आफ्ना लागि बाँच्छ ? सबै परिवारका लागि बाँच्नुपर्छ । शिक्षा, दीक्षा, जागीर, कमाई, सम्पत्ति कमाउँदै जान्छ तर ऊ आफू भने बाँच्न बिर्सन्छ । हामी फक्कड, एक्लो, जति छ आफ्नो छ । कसैलाई बाँड्नु पर्दैन । म ने पाल-भारतका सबैजसो क्षेत्र घुमेको छु । नयाँ-नयाँ अनुभव बटुलेको छु । गृहस्थले यस्ता अनुभव बटुल्ने अवसर पाउँदैन । साँचो अर्थमा जोगी गृहस्थभन्दा चार दोब्बर बढी बाँच्छ ।
तपाईंले गरेको सबैभन्दा ठूलो साधना ?
दुई-चार पत्ता बेलपत्र पिसेर त्यसमा एक टुक्रा मिस्री हालेर दिनको दुई गिलास पानी पिउने साधना गरें । यो क्रम २३ दिनसम्म जारी राखें । पशुपतिनाथमा रहेको राम मन्दिरको विशेष पूजामा मैले उक्त साधना गरेको थिएँ । भारतका केही राम मन्दिरमा पनि यस्ता साधना गरें । यद्यपि हामी सधैं अल्पहारी र मन्त्रजप गर्ने भएकाले हाम्रा लागि सधैं साधना हुन्छ ।
शिवरात्री सकियो, अब कहाँ जानुहुन्छ ?
हाम्रा लागि सारा संसार नै आफ्नो घर । यद्यपि जनकपुर मेरो तपोभूमि हो । जनकपुरतिर आउनुभयो भने मलाई त्यतैतिर भेट्न सक्नुहुन्छ ।
पेट पाल्न के गर्नुहुन्छ ?
पाँचवटा घरमा भिक्षा माग्छु । त्योभन्दा बढी भिक्षा माग्ने अधिकार हामीलाई हुँदैन । यदि पाँच घरमा भिक्षा माग्दा पाइएन भने त्यो रात हामी भोकै सुत्छौं तर चिन्ता छैन, हामीलाई भोकै बाँच्ने बानी परिसकेको हुन्छ ।